7w 15w 25w 35w 50w Garbaha buluugga ah ee dibedda loo xiray,Ledcommerciallight,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - Shiinaha 7w 15w 25w 35w 50w Garbaha buluugga ah ee dibedda loo xiray, Soo saaraha & Qalabka
7w 15w 25w 35w 50w Garbaha buluugga ah ee dibedda loo xiray. Iftiinkeena iftiinka ama iftiinka iftiinka (sidoo kale iftiinka dhalada ee Ingiriisi Kanadiyaanka ah, mararka qaarkood iftiin (laydhka iftiinka) ee Ingiriisi Maraykan ah) waa qalab iftiin leh oo lagu rakibay fur furan oo saqaf ah. Marka la rakibo waxay u muuqataa in ay leedahay iftiin iftiin ah oo ka yimaada daloolka saqafka, xoojinta iftiinka dhinaca jihada hoose sida nalalka ballaaran ama iftiin yar. Noocyo tamar leh oo tamarta korontada dhaliya, nalalka saqafka LED-ka oo bixiya muuqaal casri ah oo dareen ah. Nalalka ilbiriqsigani waa tamar aad u tayo badan leh nolol dheer, taas oo u oggolaaneysa keydin badan oo ku saabsan biilasha tamarta iyo kharashka nalalka beddelka ah marka la keeno koronto iftiin leh. Dhamaan nalalka laydhka ah iyo iftiinka derbiga oo dhan waa ilaha la keenay.( 7w 15w 25w 35w 50w Garbaha buluugga ah ee dibedda loo xiray )
©2005-2018 Karnar Nala soo xiriir Khariidadda bogga Last modified: April 24 2019 04:04:58.